Izinzuzo zebhange laseSwitzerland, Ubumfihlo, Izindleko nokusetha i-Akhawunti
I-Swiss Banking sekuyisikhathi eside kuhlotshaniswa nebhange lobuchwepheshe, eliqondayo, elivikelekile. Kuyinto inhlonipho yokubusa ngokungathathi hlangothi nokunamathela emigomeni yemfihlo yebhange. Abantu abaningi bavame ukuphenduka amabhange aseSwitzerland ngezizathu ezimbili. Okokuqala, abaningi bafuna ukulondoloza izimpahla ezinkulu ezihlolisweni zomphakathi. Okwesibili, iningi labantu libuyela eSwitzerland ukuze likhulule umthwalo wentela enzima. Bobabili amaqembu ngokuvamile ayebheke ku-Swiss Bank consortium njengendlela ekhangayo kakhulu.
Futhi lezi zinsizakalo aziyona into entsha. Ama-akhawunti asebhange aseSwitzerland abe ngumholi webhange lamanye amazwe amashumi eminyaka. Lokho akubambisanga nhlobo emiphakathini yezombusazwe kanye nezingxabano zomphakathi emhlabeni jikelele. Bayibaholi bezokuphepha kwezimali kanye nokuzinza kwamakhulu eminyaka. Empeleni, izwe liye lafaka lokhu kusukela ezinsukwini zikaLouis the XIV. Ngaphezu kwalokho, sekuye kwaqhubeka ezinsukwini ezandulele ukuguqulwa kweFrance nakuzo zonke zomhlaba. Ukulondolozwa kwempahla kanye nenkokhelo evela intela engekho emthethweni noma ohulumeni abacindezelayo kwakuyizintambo ezivamile. Ngakho-ke, i-depositor eqondayo ibheke eSwitzerland ukuhlinzeka lezo zinsizakalo.
Isizathu sokuthi ibhange laseSwitzerland likukhuthaze lokhu ukuncomeka amabhange ase-offshore idumela yilokhu. Ukuvelela kwalo kusekelwe eqinisweni lokuthi iSwitzerland inemithetho nemigomo eyindida kakhulu ekhona. Isishayamthetho sibeka imingcele ethile yamabhange ayo. Ngaphezu kwalokho, bancamela ukuvikela nokugcinwa yimfihlo kwama-akhawunti akhe wediphozithi yakwelinye izwe, lapho kungenzeka. Okunye okuthuthukisa leli gama ukuthi amabhange aseSwitzerland anikeza ubuchwepheshe obungakaze bubonwe. Ngaphezu kwalokho, bakhombisa ukwethembeka ngokuphelele esimweni esihle kakhulu sezimali sasebhange emhlabeni.
Umlando we-Swiss Banking
Usuku lwanamuhla Imfihlo yeBhange yaseSwitzerland ingayithola imvelaphi yayo kuMthetho waseSwitzerland Banking we-1934. Uhulumeni wabo wasungula umthetho ngokuyinhloko ngenxa yengozi yaseJalimane yamaNazi kanye nezingxabano zezombusazwe eFrance. Bobabili izinkampani zazama ukucindezela amabhange aseSwitzerland ekudaluleni ulwazi lwe-depositor egameni le "okuhle kwezwe."
AbaseSwitzerland baphendule uMthetho weBhange we-1934. Lo mthetho ngokuyinhloko ubeke imithetho yemfihlo ye-akhawunti. Lanikeza nesisekelo somthetho salokho. Ekugcineni, lunikeze izijeziso zobugebengu kulabo abanciphisa ukugcinwa kwe-akhawunti yama-deposit. Lokhu kwaholela esimeni samanje esiyisisekelo (futhi nje sabeka lapha) sithatha imithetho nemithethwana njenge-inflexible. Okushoyo, ngokuphathelene nokugcinwa kwemfihlo nokuthengiselana, kanye nobunikazi be-depositors noma i-akhawunti. Abayeki imilando yasebhange kancane. Kumele kube khona icala elikhulu lobugebengu ngaphambi kokuba inhlangano kahulumeni, ikakhulukazi engaphandle, ikwazi ukukhawula lesi sihlangu semfihlo.
Ngisho nokumangalelwa kokukhokhiswa intela kwakungeke kube ngokwanele ukuphawula imithethonqubo yemfihlo ebhange laseSwitzerland. Ukumangalelwa nje akuyona icala elikhulu ngokwanele eSwitzerland, elingabi lutho ngaphandle kokungalungi. Ngokuqinisekile akwanele ukwephula imithetho yayo. Ukumangalelwa kufanele kube yinto engathí sina ukuze ibhange laseSwitzerland libheke ngisho nokulahla imithetho yalo. Lokho kusho ukuthi sincoma kakhulu ukuhambisana nokukhokhwa kwentela ngokulawula kwakho kokuhlala kanye / noma ubuzwe.
Ngamazinga amaningi noma izinyathelo, amabhange aseSwitzerland anesithathu esiphelele sayo yonke imali ebanjwe kuyo ama-akhawunti ase-offshore. Uma sicabangela inani elikhulu le-Offshore, izindawo ezikhona zezindawo ezikhona, lokhu kuyimfanelo ephawulekayo. Ama-Swiss amabhange anesilinganiso esilinganiselwa ku-$ 2 trillion US plus isitatimende se-facto. Ngakho-ke, iSwitzerland isesimiso esiphelele uma kuziwa ekuhlinzekeni imvelo ebusisiwe, eyimfihlo ebhange.
Ama-Akhawunti e-Swiss Bank awakhiwe
I-akhawunti "yasebhange ebalwe" engenayo yonke into ayifuni nje kuphela i-akhawunti ekhonjiswe ngenombolo. Inombolo kunokuba igama le-depositor likhomba i-akhawunti. Amabhange aseSwitzerland abeka amazinga ukufihla kanye nama-akhawunti abo abalwe. Noma kunjalo, kufanele kube nomuntu oqanjwe igama elixhunywe ku-akhawunti elandelwe. Kodwa ibhange ligcina lingabonakali. Akuyazi ukuthi kubani abaphathi bamabhange ambalwa asebhange laseSwitzerland lapho ligcinwe khona.
Lezi zincwadi ngokusobala zihlinzeka ngezinga elijulile lemfihlo. Zingaba usizo kakhulu, isibonelo, kwi-corporation noma inhlangano evelele emkhakheni wokuzuza okukhulu. Kukhona ukuthengiselana lapho kudinga khona ukuhlanganisa izimpahla ngaphandle kokuxwayisa abaphikisanayo, abezindaba, noma ezinye izinhlangano ezingase zibe nenzondo. Into eyodwa kufanele ibe sobala kusukela ekufundeni ngenhla. Ngisho ne-akhawunti yasebhange yaseSwitzerland, ibhange alinakuze liqinisekiswe ngokungaziwa; ikakhulukazi ezindabeni zobugebengu. Kodwa i-akhawunti yaseSwitzerland ibalwe eduze ne-akhawunti ingafinyelela ekuqedeni ukuqonda.
I-Swiss Banking Namuhla
Ezinye izikhungo ezindala zingase zime futhi zife kanye nobuchwepheshe obushintshayo. Kungase kube namasu aphelelisa injongo noma indlela yabo. Lokhu akunjalo neze esikhungweni sasebhange saseSwitzerland. I-Swiss banking ishintshwe ngokushesha ekuphenduleni ijubane lobuchwepheshe be-whirlwind elibekwe izwe lanamuhla. Kusukela ekudlulisweni kwemali kagesi, kumathekisthi okuvikela ukuthungatha kwe-mega-bit, amabhange aseSwitzerland ahamba phambili kumkhuba wamabhange wamanje. Esikhathini esiningi uhamba ngezinsuku zamakhadi angasayineli kanye ne-suit-case emihlanganweni yezandla. Manje sebeshintshwe ngokuphindaphindiwe ngokweqile nge-signatures kagesi kanye ne-internet-based "transfer" yezimpahla. Intela ukuhambisana nokuyingxenye yomdlalo namuhla. Amazinga omhlaba wonke wokulwa nokukhishwa kwemali asekhona ukugcina abantu abahle nabafana ababi baphume.
Ngokuqala komthetho we-Akhawunti ye-Akhawunti yokuThengiswa kweNtela ye-Akhawunti (FATCA) e-US, amabhange afuna ukudlulisa imali yase-US kumele ahlinzeke ngokubheka intela kubanikazi be-akhawunti base-US. Inhlangano yase-United States yasungula umthetho ngo-Mashi 18, i-2010 (26 USC § 6038D) futhi yandisa ngo-Disemba 31, 2012 (26 USC §§ 1471-1474). Inhloso kwakuwukuphoqelela ukuqoqwa kwentela emhlabeni jikelele. Ucwaningo oluvela eTexas A & M luphelile ukuthi lesi senzo sizodala ngaphansi kwezingu-$ 2.5 zezigidi ngemali engenayo esikhathini sonyaka we-11. (Lokhu kuphikisana nokulinganisa kokuqala kwebhiliyoni le-Congress's $ 8.7 billion ngesikhathi esifanayo.) Umbiko kuForbes, Nokho, ubonisa ukuthi ukotshwa ukuphoqelela i-FATCA ngaleyo minyaka kuzobiza u-$ 8 billion.
Ngenxa yendleko ephezulu yokuthobela, amabhange amaningi aseSwitzerland anqume ukungamukeli amaklayenti ase-US. Kodwa-ke, kunamabhange amaningana eSwitzerland abamukela amaklayenti ase-US. Ngakho-ke, ukuze uqede le ndleko, amabhange abamukela abaseMelika anezidingo ezingaphansi kwe-deposit kubo cishe ku-$ 250,000 kuya ku-$ 1 million US.
Izinsizakalo Zokutshala izimali
Namuhla, amabhange aseSwitzerland asebenza njengezindlu zokutshalwa kwezimali. Basebenzisa abanye abaphathi bemali abanamakhono kakhulu. Ngakho-ke, kunezinketho zokudayisa amasheya, izibopho, izimali ezihlangene kanye nezinsimbi eziyigugu online. Ngaphandle kwalokho, ungaba nomeluleki wezezimali oqeqeshwe ukuphatha iphothifoliyo yakho.
Kufanele kube sobala ukuthi amabhange aseSwitzerland aqhubeka nokuhlinzeka ngezwe langempela, izixazululo ezitholakalayo ezinkingeni eziningi ezibhekene nomsebenzi webhizinisi ophumelelayo wanamuhla noma owesifazane; ikakhulukazi uma kuziwa ekulondolozeni impahla yabo yamanzi. Kungakhathaliseki ukuthi kuyisivikelo emithethweni engadingekile, ukuphazamiseka kwezombusazwe, ukungaqiniseki kwezomnotho, noma ngisho nomuntu oshade naye owayengumlingani, i-akhawunti yasebhange yaseSwitzerland ingase ibe yisisombululo oyifunayo.
Ukuze ibhonasi isahluko>